အာရှဒေသတွင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ ကူးစက်မှုနှုန်း မြင့်တက်လာနေ
အာရှဒေသတွင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ ကူးစက်မှုနှု...
19 มี.ค. 2563 - 02:49 น.
စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ သွားအလုပ်လုပ်နေကြသူတွေ သတ်မှတ်ထားတဲ့ နောက်ဆုံးနေ့မတိုင်ခင် မလေးရှားနိုင်ငံထဲ ဝင်ဖို့ တန်းစီစောင့်ဆိုင်းနေကြ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက် ဖြစ်ပွားနေမှုကို တားဆီးဖို့ အတွက် အာရှနိုင်ငံအတော်များများအနေနဲ့ အကြီးအကျယ် ရုန်းကန်နေကြရပါတယ်။ အာရှနိုင်ငံတချို့မှာ တင်းကြပ် ထိရောက်တဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုတယ်လို့ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးက သတိပေးထားပါတယ်။
နယ်စပ်အသွားအလာတွေကို ကန့်သတ်လိုက်တဲ့ နိုင်ငံတွေထဲမှာ မလေးရှား၊ သီရိလင်္ကာနဲ့ ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံတို့လည်း ပါဝင်ပါတယ်။
တောင်အာရှဒေသမှာတော့ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုက ၅၀၀ အောက်မှာပဲ ရှိနေသေးပေမယ့် အဲဒီနိုင်ငံတွေရဲ့ ကျန်းမာရေး စနစ်အတွက် မနိုင်မနင်း ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။
လောလောဆယ် တကမ္ဘာလုံးမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုပေါင်း ၁၈၅၀၀၀ ခု ရှိနေပြီး လူပေါင်း ၇၆၀၀ သေဆုံးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် စီးပွားရေး ထိခိုက်မှုတွေ လျော့ကျသွားစေဖို့ စီမံကိန်းတွေ ချမှတ် ဆောင်ရွက်နေချိန်မှာပဲ အာရှ စတော့ခ်ရှယ်ယာ စျေးကွက်မှာ ရှယ်ယာစျေးတွေ ဆက်ကျဆင်းနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးရဲ့ သတိပေးချက်
အင်ဒိုနီးရှား၊ သီရိလင်္ကာ၊ ထိုင်း၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ မြောက်ကိုရီးယား အပါအဝင် နိုင်ငံပေါင်း ၁၁ နိုင်ငံမှာ ရောဂါ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ကူးစက် ဖြစ်ပွားနေတာ ဖြစ်ပေမဲ့ ဒီသတိပေးချက်ဟာ အရှေ့တောင်အာရှ ဒေသတစ်ခုလုံးအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးက ထုတ်ပြန်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးစက်မှုတွေ နောက်ထပ် ပြန့်ကျဲ ဖြစ်ပွားနေတယ် ဆိုတာ အတည်ပြု သိထားရပါတယ် လို့ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးရဲ့ အရှေ့တောင်အာရှ ဒေသဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာ ပူးနမ် ခက်ထရာပါလ် ဆင်း က ပြောပါတယ်။
ဘန်ကောက်လေဆိပ်မှာ ခရီးသည်တွေကို ထိုင်းတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေက စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးနေ
"နောက်ထပ် လူတွေ ရောဂါ ထပ်မကူးစက်အောင် အမြန်ဆုံး တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုပါတယ်"လို့ ဒေါက်တာ ခက်တရာပါလ် ဆင်း က ပြောပါတယ်။
အရှေ့တောင်အာရှ ဒေသမှာ ရောဂါကူးစက် ဖြစ်ပွားတဲ့ အရေအတွက်အရ တချို့နိုင်ငံတွေဟာ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအလိုက် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကူးစက်တဲ့ပုံမျိုးကို အထင်အရှား ဦးတည်လာနေတယ်လို့ WHO အဖွဲ့က ပြောပါတယ်။
စမ်းသပ်၊ စစ်ဆေး၊ ကုသ၊ သီးသန့်ခွဲထား၊ အဆက်အသွယ်ကို ခြေရာခံ ရှာတဲ့ ဆောင်ရွက်မှုမျိုးကို ဆက်လုပ်ဆောင်သွားဖို့ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
လူတွေကြားထဲ မသွားဘဲ နေတာက သိပ်ကို အရေးပါပါတယ်။ ဒီလို လုပ်တာနဲ့တင် လူတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ရောဂါ ကူးစက်တာကို အကြီးအကျယ် လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
ရောဂါကူးစက်မှုတွေ ဘယ်နေရာမှာ ပိုတိုးလာနေသလဲ
ရောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုက နိုင်ငံအားလုံးနီးပါးမှာ တိုးလာနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နှုန်းတွေကတော့ တစ်နိုင်ငံနဲ့ တစ်နိုင်ငံ ကွာပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ လာအိုနိုင်ငံ တို့ကတော့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါဖြစ်တဲ့သူ လုံးဝ မရှိသေးဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ တကယ် ဟုတ်မဟုတ် ဆိုတာကိုတော့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက အတော်ကြီးကို သံသယ ဖြစ်နေကြပါတယ်။
မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ နေထိုင်ပုံနဲ့ စားသောက်ပုံတွေက ဒီဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနေတာလို့ မြန်မာအစိုးရ ပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ်က ပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံထဲ ကို ဝင်ရောက်လာသူတွေအပေါ် အစိုးရက ကန့်သတ်မှုတွေ ချမှတ်ထားပြီး ယူကေ အစိုးရကလည်း မြန်မာနိုင်ငံထဲ မသွားမဖြစ် လိုအပ်မှသာ သွားကြဖို့ အခုအခါ အကြံပေးထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် တီမော လက်စတေနိုင်ငံမှာလည်း ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်တာမျိုး မရှိသေးဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယားမှာ ရောဂါထပ်ဖြစ်ပွားမှုတွေ နေရာကွက်ကြား ရှိလာနေ
တရုတ်နိုင်ငံမှာတော့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဖြစ်ပွားမှု အများဆုံး ဖြစ်ပြီး ၈၀၀၀ ကျော် ရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တရုတ်နိုင်ငံမှာ အသစ် ဖြစ်ပွားတဲ့ ကူးစက်မှုတွေဟာ ပြည်ပကနေ လာတဲ့သူတွေမှာပဲ အများစု နီးပါး ဖြစ်တာ တွေ့ရပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာတော့ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို ထိန်းချုပ်ဖို့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေကြောင့် ချီးကျူးခံနေရပါတယ်။ တောင်ကိုရီးယားမှာ လူထောင်ပေါင်းများစွာကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေ အလျင်အမြန် လုပ်နေသလို ကားမောင်းလာသူတွေကို စစ်ဆေးမှုတွေ အပါအဝင် ဆန်းသစ်တဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါကို တားဆီးဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယားမှာ ရောဂါကူးစက်မှု အသစ်တွေ ကျဆင်းသွားပေမဲ့ အခုအခါ နိုင်ငံတဝန်း ကြိုကြားကြိုကြား ရောဂါကူးစက်မှုတွေ တွေ့နေရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၄ နာရီအတွင်း ရောဂါကူးစက်မှုသစ် ၉၃ ခု ထပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒေဂူးမြို့ ဆေးရုံတစ်ခုက နာမကျန်းသူတွေနဲ့ သက်ကြီးရွယ်အို လူနာတွေ အတော်များများ ရောဂါ ကူးစက် ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
ထိုင်ဝမ်မှာလည်း တစ်ရက်အတွင်း ရောဂါကူးစက်မှုအသစ် ၂၃ ခုထပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး အခုအခါ ရောဂါ ဖြစ်သူ စုစုပေါင်း ၁၀၀ အထိ ရှိသွားပါပြီ။
ပါကစ္စတန်မှာလည်း ရောဂါဖြစ်သူပေါင်း ၂၄၅ ဦးအထိ တိုးလာခဲ့ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ နောက်ထပ် လူ ၃၅ ဦး ရောဂါကူးစက်ခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း ၂၁၂ ဦး ရှိသွားပြီလို့ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေက ပြောပါတယ်။ အဲဒီထဲက ၄ ဦးဟာ ဘန်ကောက်မြို့က ဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုမှာ ရောဂါကူးစက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ၁၃ ဦးကတော့ လက်ဝှေ့ပွဲတစ်ခုမှာ ရောဂါကူးစက်ခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာလည်း ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က တစ်ရက်အတွင်း စံချိန်အမြင့်ဆုံး ၅၅ ဦး ရောဂါကူးစက်ခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း ၂၂၇ ဦး ရှိသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သေဆုံးသူကတော့ ၁၉ ဦး ရှိပါတယ်။
မလေးရှားနိုင်ငံမှာလည်း ရောဂါကူးစက်မှု အသစ်တွေ ထပ်ဖြစ်လာနေပြီး လူတစ်ဦးကနေ နောက်တစ်ဦးကို ဆက်တိုက် ရောဂါကူးစက် လာနေမှုကို တားဆီးနိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်း သိပ်နည်းတယ်လို့ အစိုးရက သတိပေးထားပါတယ်။
အခု ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရောဂါကူးစက်မှုသစ်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ လတုန်းက မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ လူထု ဝတ်ပြုပွဲကြီးကို တက်ရောက်ခဲ့သူ ၃ ပုံ ၂ ပုံ နီးပါးလောက်နဲ့ ဆက်နွယ်နေပြီး ဝတ်ပြုပွဲ တက်ခဲ့သူ ထောင်ပေါင်းများစွာကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးရဖို့ ရှိနေပါတယ်။
ကွာလာလမ်ပူမြို့က သောကြာနေ့ မွတ်ဆလင်ဝတ်ပြုပွဲ
အာရှနိုင်ငံတွေက ဘာတွေ ဆောင်ရွက်နေကြသလဲ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကစလို့ မလေးရှားနိုင်ငံဟာ ပြည်ပကို သွားနေတဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံသားတွေနဲ့ နိုင်ငံခြားသား ဧည့်သည်တွေကို အနည်းဆုံး လာမယ့် မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့အထိ မလေးရှားနိုင်ငံထဲ ဝင်ခွင့် ပိတ်ပင်ထားပါတယ်။
စင်္ကာပူမှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ သွားနေတဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံသား အတော်များများဟာ နောက်ဆုံးရက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ အင်္ဂါနေ့ ညသန်းခေါင် မတိုင်ခင် မလေးရှားနိုင်ငံထဲ ပြန်လာနိုင်ဖို့ နယ်စပ်မှာ တန်းစီ စောင့်ဆိုင်းခဲ့ကြရပြီး တချို့ကတော့ အဲဒီမှာပဲ နေကြရမယ့် ပုံ ရှိနေပါတယ်။
ကွာလာလမ်ပူမြို့က လမ်းတွေမှာ လူတွေ မရှိသလောက် ရှင်းနေပြီး စူပါမားကက်တွေလည်း အခြေခံစားသောက်ကုန်တွေကို အကန့်အသတ်နဲ့သာ ရောင်းချပေးနေပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ စာသင်ကျောင်းတွေ၊ ဘားတွေ၊ ရုပ်ရှင်ရုံတွေနဲ့ တခြား ဖျော်ဖြေရေးပွဲတွေ ပိတ်ထားလိုက်ပါပြီ။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုပေါင်း ၂၀၂ ခု ရှိခဲ့ပြီး သေဆုံးသူ ၁၇ ဦး ရှိခဲ့တဲ့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာတော့ လူဦးရေ ၁၀၇ သန်းရဲ့ တစ်ဝက်လောက်ကို ထိထိရောက်ရောက် သီးသန့်ခွဲထားပြီး အတင်းကြပ်ဆုံး ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်မှုတွေ ချမှတ်ထားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံတကာ လေကြောင်းခရီးစဉ်တွေ ပိတ်ပင်ထားဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတော့ ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရက ပြန်ရုတ်သိမ်းလိုက်တဲ့အတွက် အခုအခါ နိုင်ငံခြားသားတွေ နိုင်ငံထဲကနေ ထွက်ခွာခွင့် ရလာနိုင်ဖွယ် ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံထဲ ဝင်လာသူတွေကတော့ သီးသန့်ခွဲခံထားရဖို့ ရှိတဲ့ တင်းကြပ်တဲ့ စည်းမျဉ်းတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်ဝမ်မှာလည်း မတ်လ ၁၉ ရက် ကြာသပတေးနေ့က စလို့ နိုင်ငံခြားသားတွေကို ပြည်ဝင်ခွင့် ပိတ်ပင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်ဝမ်သားတွေ အပါအဝင် ဘယ်သူမဆို ၁၄ ရက်ကြာ သီးသန့် ခွဲခံထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာတော့ ပြည်သူတွေ စိတ်အေးအေး ထားကြဖို့ ဝန်ကြီးချုပ် အင်မရန် ခန်းက ရုပ်မြင်သံကြားပေါ်ကနေ တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ "ဘာမှ စိတ်ပူဖို့ မလိုပါဘူး။ နိုင်ငံတစ်ခုလုံး အတူ တိုက်ပွဲဝင်ကြမယ်။ ဘုရားအလိုတော်ရှိရင် ဒီရောဂါဆိုးကြီးကို တိုက်ဖျက်နိုင်မှာပါ"လို့ သူက ပြောသွားပါတယ်။
အခုလာမယ့် သီတင်းပတ်ကုန် ရက်ပိုင်းကစလို့ ပြည်ပကနေ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကို ပြည်ပကနေ ရောက်လာမယ့် လေကြောင်း ခရီးသည်တွေအားလုံး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါ ကင်းရှင်းကြောင်း အထောက်အထား လက်မှတ် ပြဖို့ လိုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာလည်း ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကစလို့ သီတင်းနှစ်ပတ်ကြာ လေယာဉ်တွေခရီးစဉ်တွေအားလုံး ဆိုက်ရောက်ခွင့် တားမြစ်ထားပြီး အခြေခံ စားသောက်ကုန်တွေအပေါ် စျေးနှုန်း ထိန်းချုပ် ကန့်သတ်ထားပါတယ်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုပေါင်း ၁၄၂ ခု ရှိခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့ ခရီးရှည် ရထားခရီးစဉ် ၃၀ နီးပါးလောက်ကို ဆိုင်းငံ့ထားလိုက်ပါတယ်။
ဗိုင်းရပ်ကြောင့် တကမ္ဘာလုံး ပိတ်ဆို့နိုင်သလား
ကိုရိုနာသံသယ စောင့်ကြည့်လူနာ သေဆုံး မှု ၅ ဦးရှိလာ၊ ကျိုင်းတုံက သေဆုံးသူလူနာ အဖြေ စစ်ဆေးဖို့လုပ်နေ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးသူ ၆၅၀၀ ကျော် ရှိလာ
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ စီးပွားရေး တိုးတက်မှုနှုန်း မြှင့်တင်ဖို့အတွက် အခွန်နှုန်း လျှော့ချမှု အပါအဝင် ဒေါ်လာ ၈ ဘီလျံဘိုး စီမံကိန်းကြီးတစ်ခုကို ထုတ်ဖော်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ လူတွေ ထိတ်လန့်တကြားနဲ့ အစားအသောက်ပစ္စည်းတွေ အလုအယက် ဝယ်နေကြတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေချိန်မှာပဲ အခြေခံ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကို အချိုးကျ အကန့်အသတ်နဲ့ ရောင်းချဖို့ စျေးဆိုင်တွေကို ရဲတွေက ညွှန်ကြားထားပါတယ်။
အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတ ဂျိုကို ဝီဒိုဒို က လူတွေ အထိတ်တလန့် ဖြစ်ကုန်မှာ စိုးတဲ့အတွက် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ ကူးစက်မှုအကြောင်း သတင်းအချက်အလက်တွေကို သူတမင်တကာ ထိန်ချန်ထားတယ်လို့ မကြာသေးခင်ကပဲ ထုတ်ဖော် ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံမှာတော့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါ ရှိနေတယ် ဆိုတာကို စမ်းသပ်တွေ့ရှိခဲ့အပြီး သူ့ရောဂါပိုးတွေကို လျှောက်ဖြန့်ပစ်မယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သူ အသက် ၅၇ နှစ်အရွယ် အမျိုးသား တစ်ဦး သေဆုံးသွားပြီလို့ သတင်းတွေက ဆိုပါတယ်။
อัลบั้มภาพ အာရှဒေသတွင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ ကူးစက်မှုနှုန်း မြင့်တက်လာနေ